Akụkọ anyị - Bromley, Lewisham & Greenwich Mind
Ị nọ ebe a: Mbido > Gbasara anyị > Akụkọ ihe mere eme anyị
Steeti Stones, otu n’ime obodo izizi echiche ọgụgụ isi obodo na Bromley. Ọ bụ ụzọ tupu oge ya n'ihe metụtara itinye aka na ndị ọrụ, yana 'ndị otu' na kọmitii njikwa na ọrụ ndị na-agba ọsọ.
"Mgbe mbụ ọ malitere bụ ndị ọrụ afọ ofufo na-arụ ya kpamkpam. N'ihe dị ka afọ 1978, e nwere ihe iyi egwu nke mmechi ya mere anyị mere nọdụ ọdụ. N'ikpeazụ, e kwetara na n'ime ụlọ ọhụrụ dị na saịtị ahụ, a ga-enwe 'ụlọ' (nke a na-akpọ SS club na nke ugbu a SS BLG Mind) na ndokwa maka ndị nwere mkpa ahụike uche.
O nyeere m aka nke ukwuu mgbe m nwere nsogbu mgbe nne na nna m nwụchara. Emere m ihe niile m nwere ike ime iji nyere m aka. Anyị gara n'ihu na-agbakọta ego, nke malitere na bọọlụ Valentine, ka ọ na-aga n'ihu. M wepụtara onwe m afọ 42, ọ tụfurukwa m naanị otu izu.”
- Maureen Ugwu
Ọ bụ ezie na ọ na-esiri ike ịmepụta ihe ọ bụla mgbe paragraf ole na ole mbụ nke akwụkwọ akụkọ a kwụsịrị site na 1 February 1957, isiokwu ahụ malitere:
Ọhapụrụ iche nke Bromley maka inyere ndị ọrịa uche aka ịlaghachi ndụ ha, Stepping Stones Club, bụ isiokwu nke akụkọ nye Healthtù Ahụ Ike Worldwa, òtù United Nations na-ahụ maka ahụike, na Geneva.
Akụkọ a na-enye akụkọ ihe mere eme na-atọ ụtọ nke klọb na ọrụ mgbaka ụlọ ọgwụ Bromley.
Ọ na-enyekwa Bromley ụtụ na-egbuke egbuke dị ka ebe nwere mmụọ siri ike nke obodo na ndụ ọha na eze na-eme nke ọma, nke na-adọrọ mmasị karịsịa ka ndị mmadụ ga-agụ ya n'ụwa nile.
Orpington Mental Health Association guzobere.
Nhazi nke Beckenham Mind.
Mmepe gọọmentị nke Anchor House na Orpington, nke ka bụ isi ụlọ ọrụ BLG Mind. A zụrụ ụlọ ahụ na £7,500.
Mgbasa ozi Mgbasa ozi na-ebipụta: ego ga-enyere aka nyocha na isi ihe
Lee ka nchikọta ego siri gbanwee!
Ụlọ Anchor na-eme ememe afọ iri nke ọrụ.
Na 1979, Greenwich Mind malitere ịnye ọrụ site na Ormiston Road Center ọhụrụ ha.
Na Tuzdee 16 Ọktoba 1979 (ọ bụghị Ọktọba 18 dị ka ekwuru na clipping dị n'elu) Stepping Stones na-eme ememme jubilii ọlaọcha ya.
N'ịkọwa ya dị ka 'ụlọ ọrụ enyemaka mmụọ mbụ nke Britain', akwụkwọ akụkọ mpaghara nke e bipụtara na 4 October 1979 gụrụ:
The Stepping Stones Club, Masons Hill, Bromley, abụrụla ihe nlereanya maka ọtụtụ ebe ndị yiri ya na mba ahụ dum.
Mgbe e mepere ngalaba ọgwụgwọ ọrụ na Bromley Hospital na 1946, ndị dọkịta abụọ na onye ọrụ na-elekọta mmadụ kpebiri iziga ụfọdụ ndị ọrịa psychiatric ha na ngalaba ahụ dị ka nnwale.
Nsonaazụ a na-ekwe nkwa maka ndị ọrịa ahụ ma nyekwa aka belata ụfọdụ "taboo" gburugburu ahụike uche.
E bipụtara akụkọ nke abụọ nke akwụkwọ akụkọ gbasara ememme jubilii ọlaọcha Stepping Stones otu izu ka e mesịrị, oge a na Kentish Times.
Ọ malitere: Chegodị ụdị ebe ị ga-aga na-eme ụdị ihe omume niile ma ọ bụkwanụ nọrọ naanị gị na-akparịta ụka ma zuru ike. Nke ahụ bụ ụdị ebe Stepping Stones dị.”
Akụkọ ahụ gara n'ihu: "Ọbụna n'oge a, a ka nwere mkparị ọha na eze metụtara ọrịa uche na Stepping Stones na-enye nchikota nchebe na-adịghị ahụkebe maka ndị otu yana n'otu oge ahụ njikọ na mpụga ụwa."
Edemede ahụ kọwara etu klọb ahụ nwere ihe karịrị ndị otu 300, yana “ndị ọrụ afọ ofufo na ndị ọrịa gbakere nke ọma iji nyere onwe ha aka”.
Edepụtara ihe omume ndị a na-enye, gụnyere nri nri, nka, ọrụ ubi, ịgba egwu na “ọbụna yoga”, bụ nke a tụlere nke ọma ka ọ dị ntakịrị n'ebe ahụ na 1979.
Su, aka "Chairman, Oriakụ Bobby Lipkin", gwara akwụkwọ akụkọ: "Enwere otu oke nke klọb ahụ dabere na ịdị adị ya niile bụ na ọ nweghị onye ga-abata na klọb wee nọrọ naanị ya."
1979 - Akwụkwọ akụkọ Stepping Stones
Akwụkwọ akụkọ Stepping Stones 'October na-eto "ọrụ na-adịghị agwụ agwụ" nke ndị na-etinye aka na ime emume ncheta afọ 25 na mbụ n'ọnwa ahụ ka ọ bụrụ "ihe ịga nke ọma pụtara ìhè".
Akwụkwọ akụkọ ahụ na-ekwupụtakwa na a ga-akpọ Slimming Group ugbu a dị ka "Slim & Work", na-egosipụta eziokwu ahụ bụ na, ọ bụ ezie na nri ka ga-adị na atụmatụ, "ndị nọ n'ìgwè ahụ na-eche na ha ga-achọkwa ịkwa akwa".
Onye ode akwụkwọ akụkọ bụ Jenny Martin kwuputakwara na ọ na-eme ihe nkiri cine super 8 gbasara ọrụ ụlọ ọgbakọ ahụ.
Amalitela usoro ndụmọdụ Ndụmọdụ Ormiston, nke a maara ugbu a Echiche.
Beckenham Mind malitere inye ndi mmadu ndi mmadu nsogbu, na MindCare guzobere dika onye okacha amara nke ndi ebere
Beckenham Mind, Orpington Mental Health Association na Stepping Stones Club jikọrọ aka wee guzobe Bromley Mind.
Bromley Mind na-eguzobe mmemme nkwado ndị ọgbọ ahụike uche na Bromley, na-eduga na nzukọ a bụrụ onye ama ama dịka ọkachamara n'ọhịa.
Ọrịa mgbaka otu e guzobere.
Bromley Mind alaka wee malite ibuga ọrụ na Lewisham.
Bromley Mind na-amalite ịnye ọrụ na Lewisham kpamkpam, na-eduga na mmalite nke Bromley & Lewisham Mind (BL Mind).
BL Mind bụ otu n'ime ndị guzobere Bromley Third Sector Enterprise (BTSE).
BL Mind na-ewepụta ọrụ ịdịmma na nkwụsi ike maka ndị nne dị ime na ndị nne ọhụrụ.
Bromley Iweghachite College emepe.
Greenwich Mind bụ zoputara site na mbibi nke mmebi ego.
Lelee ntinye akwụkwọ akụkọ gọọmentị.
Bromley & Lewisham Mind jikọtara ya na Greenwich Mind ka ọ bụrụ Bromley, Lewisham & Greenwich (ma ọ bụ BLG) Mind.
GH London London Nkwado Ndị Ọgbọ na Ogige Ndị Obodo guzobere.
Ahụike uche nke BLG ọzụzụ otu guzobere.
BLG Mind na-enweta nzere nzere dị ka IPS Employment Support Center of Excellence.